-ekwusa Kraịst, Gosi ha Otuto — njem Lee - Official Site
Ịgwa ndị mmadụ banyere Jizọs yiri ka otu n'ime ihe ndị ahụ na anyị nile maara na anyị kwesịrị ime, ma anyị niile na mwute maka na ọ dịghị eme ezu. Abụ m nri? Abụ m naanị na? Ọbụna dị nnọọ a gara aga izu, M na-enwe obi mara ikpe n'ihi na a mmekọrịta M wee malite iwu na otu nke ndị agbata obi m ka ụdị malitere ada oyi. Enwebeghị m dị ka kpachaara anya dị ka m kwesịrị banyere ewu na na mmekọrịta, na aka iso na-agbalị ịgwa ya banyere Jizọs. Na o yiri ka m na-eche otú a na-. The ajụjụ m chọrọ ịjụ bụ ya mere? Gịnị obi n'ọnọdụ kwesịrị ka a ofu? M mkpa m n'uche ka a ọhụrụ. M ga-echeta ihe mere m na-emebiga ya.
Ugbu a, e O doro anya na evangelism bụ egwu na ike na-akpata nchekasị. Ma nke ahụ bụ nanị ihe na-aga n'ime obi anyị. Gịnị banyere otú ndị ọzọ na-eche banyere ya? Agbalị ka o doo a na ha na mmehie na mkpa nke a Onye Nzọpụta na Onye na Jizọs bụ nanị ụzọ, yiri ka ndị kasị njọ mpụ dị n'eluigwe na ala anyị "emede" omenala. Ọ bụ mkparị.
Ya mere, gịnị ka anyị kwesịrị ikwusa ozioma? Anyị na-emeghe anyị n'ọnụ ma ọ dịghị onye chọrọ ịnụ ya. Ndị kpọrọ anyị asị n'ihi na ọ na-. Ndị na-ekwu na anyị na-akpata ụfọdụ. Ndị na-ekwu na anyị na-arapara ochie bụzi ihe mgbe ochie akwụkwọ na bụzi ihe mgbe ochie echiche. Anyị na-ebi ọchịchịrị, enweghị omume enyi ụwa. Ya mere, gịnị? Ọ bụ na anyị imefusị oge anyị
Anyị enwere maara ihe mere anyị na-eme ya, ma ọ bụ anyị ga-ada mbà. Ọ bụ na anyị ozi oma otú anyị nwere ike ịmanye mmadụ nile ịdị ka anyị? Ọ bụ n'ihi na anyị na-bigots na-eche na anyị na-mma karịa mmadụ nile ọzọ? Ọ bụ n'ihi na anyị nile mkpa ụdị ụfọdụ nke olileanya na-jidesienụ na Jizọs ga-? No. Anyị na-ekwusa ozi oma n'ihi na anyị chọrọ ka ndị mmadụ na-ahụ ebube Chineke. Na anyị na-ahụ ebube na Ọkpara Ya.
Ọ bụrụ na ị na-eje ije pụọ na otu ihe ka ọ bụrụ na. Anyị na-ekwusa Kraịst n'ihi ya, ndị mmadụ pụrụ ịhụ ebube.
Gịnị mere o ji?
Ọgwụ ọjọọ riri ahụ na-elu n'ihi na ha adịghị aghọta ebube Chineke. Rappers ekwulu aha ya na-etinye onwe ha on a larịị na Jesus, n'ihi na ha adịghị aghọta ebube Chineke. Young dudes anyị obodo gbaa onye ọ bụla ọzọ, n'ihi na ha adịghị aghọta ebube Chineke. Young ladies atụkwasị obi na mmekọrịta n'ihi na ha adịghị aghọta ebube Chineke. Dara mbà n'obi na-eto eto igbu onwe ha n'ihi na ha enweghị olileanya, n'ihi na ha adịghị aghọta ebube Chineke. Ndị mmadụ na-aga hell n'ihi na ha ahụbeghị ebube Chineke na Gospel na tụkwasịrị Kraịst. Ọ na-ahụ ebube Chineke ihe, na na anyị chọrọ ka ahụ ya.
Mgbe anyị na-enweta a ghọta nke ebube Chineke na Kraịst, anyị ga-adị n'otu. Ya mere, ka anyị chee echiche banyere ihe ọ pụtara inyere ndị mmadụ aka hụ ebube Chineke na a gbara ọchịchịrị n'ụwa, ebe ndị mmadụ na-adịghị ọbụna na-achọ ịma Ya.
Pọl onyeozi maara ihe ọ dị ka na-eje ozi n'etiti ndị mmadụ kpọrọ ya asị na ya Gospel. Anyị na-emekarị chere na Pọl nọ ebe na osimiri na ụkwụ ya ruo philosophizing dị ka ọ na-ede akwụkwọ ozi ndị a. No, Paul bi na ata ụwa na ezigbo isi ike - ụwa nke na ọtụtụ ụzọ a otutu ihe siri ike karịa nke anyị. Na nke a akwụkwọ ozi e dere na na onodu.
Nke abụọ Pọl degaara ndị Kọrint na chọọchị bụ na ọtụtụ ụzọ a iji zara ọnụ na nkọwa nke ozi ya na a na-emegide. Tụgharịa na m na- 2 Ndị Kọrịnt 4:1-6.
Ya mere, -enwe ozi a site n'ebere nke Chineke, anyị adịghị ada mbà n'obi. 2 Ma anyị ajụwo ihere, omume nzuzo ụzọ. Anyị agaghị ekwe ime aghụghọ ma ọ bụ na-tamper na okwu Chineke, ma site na-emeghe na nkwupụta nke eziokwu anyị ga-aja anyị na onye ọ bụla akọ na uche n'anya Chineke. 3 “Na ọbụna ma ọ bụrụ na anyị gospel bụ veiled, ọ na-atu kwa ilu ka onye nāla n'iyì. 4 Nye ha chi nke ụwa kpuo ìsì uche ndị na-ekweghị ekwe, mee ka ha ghara ịhụ ìhè nke ozioma nke ebube nke Kraịst, onye bụ onyinyo nke Chineke. 5 N'ihi na ihe anyị na-ekwusa esighị anyị onwe anyị, ma Jesus Kraịst dị ka Onyenwe, onwe anyị dị ka ndị ohu gị maka Jesus 'n'ihi. 6 n'ihi na Chineke, bụ onye sịrị, "Ka ìhè nwupụta n'ọchịchịrị,"Enwuwokwa n'obi anyị iji nye ìhè nke ọmụma nke ebube nke Chineke n'iru nke Jisus Kraist. (2 Ndị Kọrịnt 4:1-6)
Ọ bụrụ na ị onye kwere ekwe na Gospel, ị na a na-akpọ onye na-ekwusa Oziọma. N'ihi ya, m chọrọ ile anya n'ihe nlereanya Pọl na m chọrọ tụọ anọ nkuzi maka ozi na a gbara ọchịchịrị n'ụwa
m. Adịghị waiver N'ihi Jụrụ Ajụ nke Men (1-2)
Jụrụ Ajụ siri ike. Anyị na-na niile ahụ ya. Ọ bụ eke ndị mmadụ mbà, na-afụ ụfụ, mgbe ha na-enye a onwe ha ma ọ bụ ihe ọzọ na onye amama ha ala. Site asaa ọkwa ụmụ nwoke na-arịọ a nwa agbọghọ na-agba egwú a, ka ọ na-eme na na mahadum ị etinyere, ka adịghị na-na ọrụ gị nke chọwara, jụrụ bụ ike.
The Apostle Paul mesoo na ọtụtụ jụrụ na mmegide na-eje ozi nke ozi oma. Nke ukwuu nke mere na, n'ọtụtụ n'ime akwụkwọ ozi ya na ọ na-amanye iji chebe ya agwa na ya ụzọ na ozi ya. Ọnọdụ ya na-agbagha.
Chegodị ịbụ na ihe Pọl ọnọdụ? Ị gara Kọrint, a na-ekpere arụsị na-ekpere arụsị ebe, na ị ikwusa ozi oma ha. Ị hụrụ ha n'anya. ma ugbu a, ụfọdụ naysayers akụwo mkpụrụ nke obi abụọ uche ha. Obi abụọ banyere gị, na nzube gị, na ozizi gị. na-ewute.
Edi didie ke Paul meghachi omume? Lee anya na amaokwu 1.
“Ya mere, -enwe ozi a site n'ebere nke Chineke, anyị adịghị ada mbà n'obi.”
A. Adịghị nkụda
Pọl na-ekwu na ọ dịghị nkụda. Ọ na a gwa ọ bụghị mbà n'agbanyeghị eziokwu ahụ na ọ na-eche mmegide dị otú. Ọ enwetatụbeghị dara mbà n'obi, ma nye elu, na ẹsịn ke towel ma ọ hụrụ ihe ọzọ na-enye ndụ ya ka. Ọ lara ezumike nká ma kpebie ịghọ a dibịa afa kama. Nke bụ ịtụnanya, n'ịtụle ihe a jụrụ ajụ di ka. Ịtụle ihe niile Paul gabigara. Si mkpọrọ, nkume tụgbuo, jụrụ. Paul ka na-adịghị nkụda; nke bụ kpọmkwem ihe anyị ga-ịnwa mmadụ ime.
Ò nwetụla mgbe ị na-akọrọ ndị Gospel na onye na nwere ha na-ajụ ya? Enwere m. M nwere ike na-eche nke ugboro mgbe ndị mmadụ kwuru na ha adịghị mkpa Chineke, ma ọ bụ na-arụ ụka na m ma gwa m Chineke-adịghị adị, ma ọ bụ ndị na-malitere ime weird na-agbara m mgbe m na-akọrọ ha, ọbụna ndị na-aggressively abara m na-egwu m. Olee otú ị na nwaa ime na? Ma eleghị anya, ị ga-anwa ya agha, ma m na-alụ ọgụ. Ọtụtụ n'ime anyị ga-achọọkwa mbà, na-enye elu. Onye chọrọ ka na-agba ọsọ n'ime a brik mgbidi?
Ya mere, mgbe m na-agụ Okwu Pọl na-ekwu na ọ dịghị nkụda. M tụrụ. M chọrọ ịmata otú ọ na-eme ya. Gịnị mere na o nkụda? Ọ gwara anyị, ebe a na amaokwu a.
Paul anaghị ida obi n'ihi ịdị ukwuu nke ozi na Chineke nyere Ya. Right n'ihu nke a na isi 3, Pọl nọrọ a ụyọkọ oge na-akọwa ebube na ogbugba ndu ohu ozi. The ebube nke ịbụ otu n'ime ndị dị n'akụkụ a nke obe, onye ga-esi na-ekwusa ozi nzọpụta site n'amara site n'okwukwe n'ime Jizọs.
Pọl ume na-abịa site n'ozi ya, ọ bụghị otú ịga nke ọma ọ na-enwe mgbe ọ bụla e nyere n'oge. Ọ na-ekele A họọrọ site n'ebere Chineke na-eje ozi n'ụzọ dị otú a. Ọ na-eche ihe ùgwù. N'ezie, ọ pụta ìhè na a ọgbụgba ndụ ọhụrụ ozi bụ ihe ndị ọzọ dị ebube karịa ochie ọgbụgba ndụ ozi nke Moses. Na Paul maara na ọ bụ a ebere nke Chineke na ya niile ndị mmadụ ga-nwere ozi a. Nwoke ahụ nke kpọrọ asị chọọchị na-akpagbu Ndị Kraịst.
Dị ka ndị nke Chineke, ọṅụ anyị na-adịghị dabere na mmadụ meghachi omume n'ebe ozi. Obi ike anyị nwere Gospel-adịghị nke dabeere otú ndị na-ayi agbata azaghachi ya. Ọ na-dabere na ebube nke ọkpụkpọ onwe ya.
Ọ bụ unbelievable na ndị n'ime ụlọ a nke iso na-a ozi ebube karịa ije-ozi nke Moses onwe-ya. Ị ghọtara na? N'ihi na ọ bụghị nanị na-ahụ ha adịghị mma, ma anyị ga-esi na-agwa ha banyere Onye ahụ a. Anyị maara kpọmkwem onye onye ahụ bụ onye. Anyị na-enyere ndị mmadụ aka-ahụ ebube Chineke kpughere! Anyị na-enweta na-edu ndị mmadụ n'ime n'iru Chineke.
Kraịst, anyị ekwesịghị inwe nkụda. M na-apụtaghị na anyị ekwesịghị inwe mwute, na ọchịchịrị nke ụwa anyị. M pụtara bụ na anyị ekwesịghị ịdị ná mwute ma tụba n'ime towel. Ha nwere ike ajụ ozi, ma nke ahụ adịghị eme ka ọ bụla na-erughị ebube.
Adịghị waiver. Ghara ida obi.
B. Jụ ihere omume nzuzo Ụzọ
“Ma anyị ajụwo ihere, omume nzuzo ụzọ.”
Paul ike nwere ike ebubo ịbụ ruru unyi na ime ihe. Uma ya batara ajụjụ. Ya mere Paul azara ọnụ ya, si, "Ọ dịghị, anyị na-na emebibeghị na. Anyị na-adịghị na-ezo ihe na ịbụ slimy n'otú anyị rụọ ọrụ. "Ọ chọrọ ka ha mata na o bu n'obi na-ebi ndụ n'ụzọ kwesịrị nke Gospel.
Ọ na-ada a otutu dị ka ihe o kwuru na 2 Ndị Kọrịnt 2:17, "N'adịghị ka ọtụtụ, anyị adịghị peddle okwu Chineke n'ihi uru. Na ntụle, na Christ anyị okwu n'ihu Chineke na-ezi obi, dị ka ndị Chineke zitere.”
Paul na-aghọta na Gospel ozi-ekwu na anyị na-ebi ndụ anyị nọ n'otu ụzọ. Na mgbe anyị na-adịghị ya compromises-eje ozi anyị. Ọ na-aghọta na anyị apụghị ikwusa ozioma, na-agwa ndị mmadụ ka echegharị mmehie, -enweghị ka ụzọ ndụ nke nchegharị onwe anyị.
Lee, ma ọ bụrụ na ị na-ekere òkè Oziọma ndị mmadụ, ma ndị ahụ na ndị mmadụ na-ahụ na ndụ gị bụ a ọgbaghara, ị na-arụ ọrụ megide Gospel. Ha na-eche echiche a Gospel agaghị adị ka dị ike dị ka ọ na-ekwu na ọ bụ, akpata ya na ọ na a ọgbaghara ma ọ bụ na ọ bụ a ọgbaghara.
C. Eduhiela ma ọ bụ Tamper With Okwu Chineke
Paul mgbe ahụ na-ekwu,, "Anyị na-ajụ ihe gbasara aghụghọ ma ọ bụ na-tamper na okwu Chineke." Ma ọ bụ dị ka NIV-ewepụta na ya, "Anyị na-adịghị eji aghụghọ, anyị adịghịkwa agwagbu okwu Chineke.”
Pọl na-ekwu, ọ jụ na-aghụghọ ma ọ bụ ọgbaghara na Okwu. Ọ ka na-alụ otú o si arụ ọrụ. Paul agaghị eme ihe ọ bụla na tampers na ma ọ bụ mgbanwe ma ọ bụ mmiri ala Okwu Chineke. Ma eleghị anya, ọ dị ka ihe doro anya ihe, ma ọ bụ n'ezie-apụtachaghị ìhè.
M chọrọ ọzọ nkwusa taa ga-a mkpebi, ghara ịgbagọ Okwu Chineke. E nwere ihe nke ukwuu nzuzu si n'ebe. Mgbe ị na-eche echiche banyere ihe na chọọchị ị kwesịrị ị na-abụ otu akụkụ nke, jide n'aka na ha na-ekwusa Okwu. Jide n'aka na ha adịghị na-agbakwunye ma ọ bụ na-ewere efep ya. Ọtụtụ mmadụ na-wuru a onwe ha aha site ezighị Okwu Chineke. Pọl asị na ya ga-eme ya.
Amaara m na mgbe ụfọdụ anyị niile na-anwa ọnwụnwa ime ya ezie na. Ị na-adịghị na-a pastọ ma ọ bụ a TV na-ekwusa na-agwagbu Okwu. Olee ụfọdụ n'ime ụzọ ndị ị pụrụ ịnwa tamper na Gospel? N'ime ka o yie ihe palatable? Adịghị ekwu okwu banyere mmehie? Ná ekwe ndị mmadụ ihe Jizọs mere abụghị nkwa na ha?
Ọ bụ ụdị dị ka nke a. Ọ DỊTỤWO mgbe a na a oké oriri ma ọ bụ ihe na ị na-anọdụ ala na tebụl na-ewe a inu nke nwere akpụrụ mmiri tii na ọ bụ unsweetened? Ị na ị asị na? Gịnị mere unsweetened ice tii adị? Ọ dịghị onye na-enwe mmasị na. Ya mere, gịnị ka ị na-eme, ị na-dị ka 18 sugar ngwugwu ma na-agbalị ime ka ọ na-atọ ụtọ, n'ihi na unsweetened tii efu.
Na n'ụzọ yiri nke ahụ, ndị na-ahụ ozioma dị ka unpalatable, ọ bụghị ụtọ iji ndị mmadụ uto buds. Ya mere, ha tụkwasịkwa ihe na ya. Ha chepụta dị ka ogologo oge ha na-adịghị kpamkpam tufuo ya na ọ bụ ezi. Ha dị nnọọ chọrọ mix ihe ọzọ na e ji ya, ime ka ndị mmadụ dị ka ya ọzọ. Nke a bụ ihe jọgburu onwe ya ime! Na ọ na-ekpughe otú ị n'ezie ịhụ Gospel.
Ị na-eche na ọ dị mkpa ka tamper na ihe ma ọ bụrụ na ị na-eche na ọ bụ ezughị ma ọ bụ ezughi oke. Ọ bụla iji ọgbaghara gburugburu na Okwu Chineke bụ ihe wakpo na Ya ma n'ụzọ ọ na-azọpụtakwa.
D. State Eziokwu doro anya na Ka Ọ Ịnọ n'Adabereghị
“Ma site na-emeghe na nkwupụta nke eziokwu anyị ga-aja anyị na onye ọ bụla akọ na uche n'anya Chineke.”
The Gospel bụ ezuru. Haa eziokwu hoo haa, gherekwa. Ọ na-adịghị eme onye ọ bụla ezi ihe ọ bụla duhie ha n'ime ndị na-ekwu okwukwe. Na-agbakwụnye na eziokwu na-amị veils; ọ naghị ewepụ ha. Ọ bụrụ na a nwaanyị nwere a mara mma ihu, ya mere ekpochikwa ya a ákwà mgbochi? Ọ dịghị eme ka ya ọzọ mara mma; ọ odịbe ya ezi mma. Unu anwala etinye-eme ka elu on the Gospel n'ihi ya, ọ ga-cute. Ka ọ rụrụ na ezi ebube nke Kraịst ga na-enwu site.
Ọbụna n'etiti ojuju, anyị ekwesịghị waiver. Anyị ekwesịghị ibi ndụ n'ụzọ nke na-emegide ozi, na anyị ekwesịghị ịgbanwe ozi na-agbalị ime ka ndị mmadụ dị ka ya. Anyị kwesịrị hoo-ekwusa Okwu Chineke, n'ihi na anyị chọrọ ka ha na-ahụ ebube nke ezi Chineke.
Ma ọ bụghị otú ahụ mfe. Ya mere, mgbe o yiri ka ha dị adịghị enweta ya.
II. Kpachara Anya Maka Ọrụ nke Setan
Anyị kwesịrị na-maara nke otú Setan na-arụ ọrụ. E nwere ọtụtụ ezighị ezi banyere ya. Ụfọdụ ndị na-aga na ihe ndị gabigara ókè nke iche n'obi Satan bụ ihu ọma niile dị ike. Ihe ọ bụla merenụ bụ n'ihi nke ike ukwu ya, o nwere ike ime ihe ọ bụla ọ chọrọ mgbe ọ bụla ọ chọrọ ime ọ na-. Mgbe ahụ e nwere ụfọdụ ndị na-aga ọzọ gabigara ókè. Ha ụgha kweere na Setan ma adịghị adị ma ọ na ọ bụ nke dighi ike na-adịghị ejekwa ozi. Ma ndị a ókè bụ ụgha na ha bụ ize ndụ anyị kwere.
The eziokwu na Setan na-eme nwere ike, ezu ike na ọ na-arụ ọrụ megide Pọl na-eje ozi ya. -Ege ntị amaokwu atọ na anọ.
“Na ọbụna ma ọ bụrụ na anyị gospel bụ veiled, ọ na-atu kwa ilu ka onye nāla n'iyì. Nye ha chi nke ụwa kpuo ìsì uche ndị na-ekweghị ekwe, mee ka ha ghara ịhụ ìhè nke ozioma nke ebube nke Kraịst, onye bụ onyinyo Chineke.”
A. Ụfọdụ na-adịghị ahụ Oziọma
O yiri ka otu n'ime ndị nkatọ megide Pọl na o zoro ya ozi site na ụfọdụ, na ọ na-edebe ụfọdụ ndị si na-ahụ ya. Pọl omume bụ, ma ọ bụrụ na ndị ozi na-ezo n'ebe ụfọdụ, ọ na-ezo n'ebe ndị na-ala n'iyi. Kedu ihe nke ahụ pụtara?
Paul na-ekwu na ndị na-apụghị ịhụ ịbụ eziokwu nke ozi bụ otu ndị na-ala n'iyi. Nke a bụ doro anya na 1 Ndị Kọrịnt 1:18 mgbe Pọl na-ekwu, "Ozi nke obe bu nzuzu ndị na-ala n'iyi…" Ọ na-ese nzuzu ha. N'ebe na-adịghị na ụfọdụ ndị ebe ime mmụọ n'anya, na-ebi ndụ site n'okwukwe ná nkwa Chineke, ga-eketa ndụ ebighi ebi, bụ ndị na-eche ndị na Gospel bụ onye nzuzu. Ndị mmadụ na-adịghị adị.
Ọ ga-ata ndị na-amaghị Chineke na-aṅaghị ntị ozi ọma nke Onyenwe anyị Jizọs. Ha ga-ata ya ahụhụ na mbibi ebighị ebi, gbachie si n'iru Jehova, na n'aka ndi ima-nma nke ike ya, n'ụbọchị ọ na-abịa otuto nsọ ya na ndị na-tụrụ n'etiti ndi nile ndi kwere. (2 Ndị Tesalonaịka 1:8-10a)
Nke a abụghị a egwuregwu na anyị na-egwu. Ozi a bụ a ndụ ma ọ bụ ọnwụ ozi. Ndị na-ajụ a ozi nke ozi oma, ekweghị ihe Chineke. Na ndị jụrụ ya ga-ala n'iyi na-ata ya ahụhụ ruo mgbe ebighị ebi.
B. Satan blinds na-ekweghị ekwe
Ma, gịnị mere apụghị ndị a na-ahụ? Nke a bụ ebe Setan na-abịa na. Paul okot enye ndị "Chi nke ụwa a." Ya mere, o doro anya na o nwere ụfọdụ ike, ma ọ bụghị ike nile. Ọ na-akpọ chi nke ụwa ma ọ bụ nke a afọ na, na nanị na nke a afọ.
Ugbu a ka anyị maara na Setan kpọrọ anyị asị. Akwụkwọ Nsọ kwuru na o prowls gburugburu ụwa achọ onye ọ ike-eripịa. Ọ bụ Chineke na-nmegide (ahaghị nhata), na onye na-edu anyị ka anyị kwere ụgha kama eziokwu Chineke. Ntre, nso ke Paul ekwu Setan na-eme ebe a? Pọl na-ekwu ihe ndị a ndị mmadụ na-ala n'iyi, ma ọ bụ dị ka ọ na-akpọ ha, ekweghị ekwe, ha apụghị ịhụ n'ihi na Setan ekpuchi ha.
Nke a kwesịrị-egosi na otú dị ịtụnanya na ọ dị mkpa ka anyị na-ahụ ebube Chineke. Na otu n'ime Setan isi ihe mgbaru ọsọ bụ na-anyị si na-ahụ ya. Satan ọbụna, iji zopu anyị ka anyị jide n'aka na anyị apụghị ịhụ ebube Chineke na Gospel.
Gịnị bụ Chineke otuto? Ebube Chineke bụ ibu ya, ịma mma ya, ịma mma, nbili-elu-, ịdị ukwuu, na ihie. Ọzọkwa nwere ọtụtụ ihe na-eme na Ya aha, aha, na ọnụnọ n'etiti ndị Ya.
Ụfọdụ n'ime anyị na-eche Satan bu n'obi bụ ịnwa anyị na a pyramid ma ọ bụ onye anya atụ na a rapper si album artwork. Lee, Setan isi ihe mgbaru ọsọ bụ duhie gị n'ime n'isonyere Illuminati na a RAP album. Satan bu n'obi bụ na-ị na ịhụ ebube Chineke na Kraịst. Ma nke ahụ bụ ihe anyị chọrọ ka ndị mmadụ na-ahụ. Satan na-arụ ọrụ megide anyị. Setan bụ onye iro anyị na onye iro nke na-akpata Christ.
Setan achọghị ka anyị na-egwu ebube Chineke. Ọ chọrọ ka anyị bụrụ enamored na ebube nke ihe ụwa a. Ọ chọrọ ka anyị na-kekọtaworo ego, na-ewu ewu, na nke zuru okè mmekọrịta, na ihe ịga nke ọma. Setan chọrọ ka anyị bụrụ otú afọ ojuju na-adịru nwa oge, n'ụwa ebube, na anyị enweghị oge ka o lee anya ebube Chineke. Ma ọ bụghị ezuru ya ịdọpụ uche anyị - n'ezie, o ekpuchi anyị.
Ị e Ekwensu ohere iji zopu ị na-egbochi gị site na-achọ na ebube Chineke? Ị na-achụ ebube nke ihe ụwa a kama ebube Chineke? Ọ bụrụ otú ahụ, ị na-egwu na-akpọ n'aka ya na-emekwa ihe niile ọ chọrọ ka anyị mee. Ọ bụ ya mere na anyị dị ka ndị kwere ekwe n'ime Jizọs, n'ihi na anyị chọrọ ka ndị mmadụ na-ahụ ebube Chineke, na ha ga-atụkwasị obi Christ, na-enye Chineke otuto na ndụ ha, ikwusa ozioma.
Ụfọdụ n'ime anyị-eche ihe mere anyị na ụwa bụ ya mere ọchịchịrị ugbu. Gịnị mere ndị mmadụ ji nwee mmehie, mkpọrọmasị n'ebe onye ọzọ, na-enweghị omume enyi n'ebe Chineke. Ọfọn, ebe a bụ azịza. Ha na-na-ìsì. Ma eleghị anya, ị na a na-ekere òkè na a enyi ma ọ bụ onye ezinụlọ ruo ọtụtụ afọ na-enweghị ọganihu na ị na ike gwụrụ. O yiri gaghị ekwe omume. Anyị ekwesịghị inwe nkụda mmụọ, na ịda mbà ndị. Ọ bụrụ na Chineke nwere ike ịzọpụta gị, Ọ nwere ike ịzọpụta onye ọ bụla! Ọ bụrụ na Chineke nwere ike ịzọpụta m, Ọ nwere ike ịzọpụta onye ọ bụla. Ha na-ìsì, na ha kwesịrị ịhụ. Nyere ha aka ịhụ.
Nke a na-egosi anyị na mgbe ndị mmadụ na-ajụ Gospel, ọ pụtaghị na ndị ozi na-ejighị zie ezie bụla karịrị ọ pụtara a tọọchị na-ezughị okè ma ọ bụrụ na otu nwoke kpuru ìsì adịghị achọpụta na ị na-enwu ya n'anya ya. Ndị ìsì na-adịghị ahụ.
Ekwela ka jụrụ ajụ ka i obi abụọ Okwu. Eziokwu ahụ bụ na ndị ìsì na-apụghị ịhụ otú mara mma na Mona Lisa bụ, apụtaghị na ọ bụghị mara mma. Anyị na-adịghị anyị dabere echiche nke nkà na ndị na-apụghị ịhụ.
C. Jesus bụ The Image nke Chineke
Pọl na-ekwu Satan ekpuchi ha si n'ile "Ìhè nke ozi ọma nke ebube nke Kraịst, onye bụ onyinyo Chineke. " Nke a bụ ya mere ikwusa ozi ọma Christ na-egosi ndị mmadụ na ebube Chineke, n'ihi na Jizọs Kraịst bụ kpọmkwem ihe oyiyi nke Chineke.
Jizọs bụ abụghị naanị onye amụma Chineke. Ọ bụghị naanị onye ezitere site n'ebe Chineke. Ọ bụghị naanị na Ọkpara Chineke. Ọ bụ Ya na oyiyi nke Chineke. Kedu ihe nke a pụtara? Ọ pụtara na Jizọs, ịbụ Chineke n'onwe ya, bụ nke zuru okè nnọchiteanya nke Nna. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe Chineke ịhụnanya dị ka, ele anya na Jesus. Ebere Chineke? Lee anya na Jizọs. Olee otú Chineke si ele mmehie? Lee anya na Jizọs. Jizọs bụ Chineke n'ọdịdị ahụ, a zuru okè image.
Na-ahụ anya e kere eke anyị na-ahụ Chineke na ọrụ, ma n'ime Kraịst Jizọs, anyị nwere Chineke n'onwe ya, Emmanuel, "Chineke nọnyeere anyị." The ebube Chineke na ihu nke Jesus Christ bụ kasị sweetly conspicuous, n'ihi na unu maara na ọ bụghị naanị ndị e ji mara Chineke n'ebe, ma Chineke n'onwe ya bụ na e nwere. - Charles Spurgeon
Ọ dịghị onye hụtụrụla Chineke, ma Chineke nanị otu, onye bụ na n'akụkụ Nna, emewo ya mara. (John 1:18)
Ya mere, mgbe ndị mmadụ na-ahụ ìhè nke ozioma nke ebube nke Kraịst, ha na-ahụ Chineke na ebube Ya. Setan achọghị ka ha na-ahụ na.
Anyị na-ekwusa ozioma nke mere na ndị mmadụ nwere ike ịhụ ebube. Na na ebube a na-ahụ na Jizọs.
Ya mere Setan kpuo ìsì ikom, Olee ihe anyị kwesŽrŽ ime? Setan bụ "chi nke ụwa a." Gịnị ka anyị kwesŽrŽ ime mgbe ọ na-abịa ibuso anyị agha?
III. Ịmakụ ọrụ nke Minister
Otu n'ime ihe mere na ọtụtụ n'ime anyị ọgụ na mgba evangelism bụ n'ihi na anyị ghọtahie ihe anyị na a na-akpọ ime.
“N'ihi na ihe anyị na-ekwusa esighị anyị onwe anyị, ma Jesus Kraịst dị ka Onyenwe, onwe anyị dị ka ndị ohu gị maka Jizọs hà.”
Paul na-ekwu, ndị mmadụ na-ajụ m ntị n'ihi na ha apụghị ịhụ Christ. Na Christ bụ ihe anyị na-ekwusa. Ha na-agaghị ajụ m, ma Ya.
A. -ekwusa Kraịst!
Dị ka a na-ekwusa Oziọma, i nwere otu ihe bụ isi ọrụ. -ekwusa Kraịst. Anyị na-imikpu, na mgbagwoju anya, na daa mbà, n'ihi na anyị na-esi pụọ isi ihe. Agwa ndị mmadụ banyere Jizọs.
Mgbe ị na-abata kọntaktị na a onye na-efu, -enweghị olileanya, -enweghị Chineke na ị jụọ onwe gị ihe ị ga-eme. Gwa onye ahụ banyere Jizọs. Nke ahụ bụ ihe ha mkpa. Ee ha nwere mkpa ndị ọzọ. Ma ha isi mkpa bụ Jesus.
Ọ bụrụ na ị chọrọ n'ezie ka ndị mmadụ na-ahụ ebube Chineke, ọ na-eme ha adịghị mma na-ekwusa ihe ndị ọzọ. Ugbu a ọ pụtaghị na-adịghị inyere ndị mmadụ aka-adị ndụ ndụ ha nke ọma, ọ dị nnọọ pụtara Christ nwere na-ke ufọt na. Ọ bụrụ na Jizọs abụghị ntọala, nkwali, na mmanụ ụgbọala n'azụ ihe ọ bụla ọzọ anyị na-ekwusa, ihe anyị na-eme agaghị adịte.
Gịnị ka ọ pụtara ikwusa Kraist? Anyị maara site na ike nke ederede na n'ebe ndị ọzọ n'Akwụkwọ Nsọ na Pọl na-ekwu banyere ozi nke Oziọma. Pọl gwara ndị Kọrịnt "M kpebisiri ike amaghị ihe ọ bụla n'etiti unu ma e wezụga Christ na Ya n'obe." Paul pụtara ozi banyere Jizọs na ihe O merela na otú Ọ na-azọpụtakwa.
Ọ bụrụ na ị na-ebe a n'abalị a na ị maghị na Gospel ozi, mgbe ahụ ka kwesịrị mgbaru ọsọ gị ị na-ahapụ. Chepụta ihe ndị Gospel bụ na ma ma ọ bụ na i kwere ya. Isi ihe mere nke a ozioma, bụ eziokwu na Chineke dị nsọ, isi bụ mmehie, Christ zuru okè na nwụrụ maka ndị mmehie, na O si n'ili bilie. Na ndị na-atụgharị site mmehie na-atụkwasị Christ ga-azọpụta. Nke ahụ bụ ozi ị na a na-akpọ ikwusa.
Ị nwere ike agaghị azọpụta ndị ọzọ. Ị nwere ike ghara ịnwụ maka onye ọ bụla. Ị nwere ike ghara ịgbanwe obi onye bụ. I nwere ike na-ekwusa Kraịst. Unu anwala azọpụta ha, -agwa ha banyere Onye ahụ nwere ike. Unu anwala ịgbanwe obi, -agwa ha banyere Onye ahụ nwere ike. Unu anwala ọcha ha, -agwa ha banyere Onye ahụ nwere ike.
Mere Gospel? N'ihi na otú a ka Chineke rọputara ndị, mgbe ha nụrụ Good News. Na o doro anya site n'akụkụ Akwụkwọ Nsọ, na Chineke otuto n'ụzọ doro anya hụrụ na Good News banyere Ọkpara Ya.
Dị nnọọ nke a n'oge gara aga izu, M nụrụ abụọ àmà site ndị kwere ekwe na chọọchị m. Abụọ ndị a ndị mmadụ nwere ndị dị nnọọ iche akụkọ. Otu bụ a-ere ọgwụ ọjọọ onye e ekpochi elu. Ọzọ bụ ezi girl, onye anākpọ asì Chineke. Na ha abụọ Oziọma na-akọrọ ha ọtụtụ ugboro. Na ha na-ekweghị ya. Na ị maara ihe mechara kwaga ha na-atụkwasị obi Christ? Onye ọzọ na-akọrọ ndị Gospel na ha. Anyị amaghị mgbe Chineke ga-arụ ọrụ, ma ọ bụ otú Chineke ga-arụ ọrụ. Anyị dị nnọọ mkpa ime ọrụ anyị. Agwa ndị mmadụ banyere Jizọs, ya mere, ha nwere ike-ahụ ebube Jesus.
N'ihi na ngwá agha anyị ji ebu agha abụghị nke anụ ahụ, kama ka o ike Chineke ibibi ewusiri ike. Anyị ibibi arụmụka na ihe ọ bụla dị na uche welitere megide ihe ọmụma banyere Chineke, ma na-echiche ọ bụla n'agha irube isi Christ, ịdị njikere iji taa bụla nupụrụ, mgbe unu na-erubere ha zuru ezu. (2 Ndị Kọrịnt 10:5-6)
Ụfọdụ n'ime anyị amasị m ịkọrọ anyị ihe àmà, nke dị mma. Ma mgbe Gospel adịghị ugbu anyị na-adịghị na-ekwusa Kraịst, ma onwe. "M bụ a crackhead, mgbe ahụ, ọ bụghị m. "That's a mara mma akụkọ, ma olee otú m ga-azoputa?!! Ma ị pụtara ma ọ bụghị, nke ahụ bụ ikwusa ozi ọma onwe gị. Anyị na-eme nnọọ ihe Pọl na-ekwu na ọ dịghị eme n'akụkụ ihe odide a. Biko ịkọrọ gị akaebe, ma gwa ha na Good News na-azoputa gi.
B. -Abụ a Ohu ndị Mkpa Eziokwu
Olee ụzọ ka ị na-ekere òkè Oziọma n'oge na-adịbeghị? Ònye ka ị na-ekere òkè na? Gịnị ka ị na-ekwu okwu banyere mgbe ị nọ ọdụ na-akpụ isi oche, ma ọ bụ mgbe ị na-ntutu gị mere? Gịnị ka ị na-agwa ndị agbata obi gị ma ọ bụ gị na-arụkọ ọrụ mgbe ị na-a nkeji ole na ole na-ekwurịta banyere ihe?
Na okwu a sụgharịrị ịbụ ndị ohu, pụtara n'ụzọ nkịtị ohu. Ọ na a gwa m na-ekwusara Kraịst dị ka Onyenwe, na m dị ka ohu gị, n'ihi na Jizọs n'ihi. Nke ahụ bụ ihe ịtụnanya. Ma ọ bụghị nanị n'oge Pọl na-ekwu ihe dị ka.
Ezie na m free na nke mmadụ ọ bụla, M na-onwe m ohu onye ọ bụla, iji merie ndị kwere omume. (1 Ndị Kọrịnt 9:19)
Ị na-eme onwe gị onye na-ejere ndị kwesịrị ịnụ ozi ọma?
N'ihi na a na-anụ Oziọma n'ebe m, ọ nwere n'ebe ịbụ zuru okè ọnọdụ? M na-atụ bụghị. M chọrọ ịbụ kpachaara anya, na ọbụna mgbaka onwe m na ndị ọzọ ga-esi na-izute Christ.
Ụfọdụ n'ime anyị na-enweghị ohere. Anyị na-arụ ọrụ a otutu, ma ọ bụ na anyị na-arụ na chọọchị a ọtụtụ, na anyị na-adịghị mgbe na-eji oge na-abụghị Ndị Kraịst. Dị m ka m na mgbe ụfọdụ. Ma anyị ekwesịghị ịhapụ agwa ndị mmadụ banyere Kraịst ruo ohere. Anyị ga-eji wuo ndụ anyị gburugburu evangelism. -Eme ka àjà na-agwa ndị ọzọ banyere Kraịst.
M na-eche onye n'ime ụlọ a nke na-aga ná mba ọzọ iji na-Good News? E nwere ndị na-amaghị. E nwere ndị na-ìsì. Olee ebe ndị mepere emepe na ndị ozi ala ọzọ njikere ịga n'ebe ndị ọzọ?
Anyị na-ekwusa Kraịst, otú ikom pụrụ ịhụ Chineke. Ma ihe bụ isi ihe na-ekwusa Kraịst ma ọ bụrụ na mmadụ na-ìsì?
IV. Olileanya na-arụ n'ọrụ Chineke
Ọ bụrụ na ụwa a na-ọkọkwọrọ n'ikpeazụ na-adabere na anyị, ọ bụ n'ụzọ nkịtị-agaghị ekwe omume. Anyị na-apụghị emeghe anya ndị ìsì. All anyị nwere ike ime bụ ikwusa ozi ọma na ịhụnanya na ha. Na Chineke na-arịọ anyị ka anyị mee ihe agaghị ekwe omume? Enwere ike.
na Ọrụ 26:18, Jizọs na-ekwu na Paul, "M na-ezitere unu ka ha, ịsaghe anya ha na ka ha si n'ọchịchịrị gaa n'ìhè, na site na ike Setan Chineke, ka ha we nweta mgbaghara mmehie, na ebe n'etiti ndị e doro nsọ site na okwukwe na mụ. "
Olee otú nke ahụ ga-ekwe omume? Man nweghị ike na. -Ege ntị ahụ n'amaokwu 6.
“n'ihi na Chineke, bụ onye sịrị, "Ka ìhè nwupụta n'ọchịchịrị,"Enwuwokwa n'obi anyị iji nye ìhè nke ọmụma nke ebube nke Chineke n'iru nke Jisus Kraist.”
A. Chineke emepụtakwa na recreates
Paul na-ewe a nke abụọ na-echetara anyị onye Chineke bụ. Ọ chọrọ inye anyị a ngwa-echetara Ya track ndekọ. Nke a abụghị Chineke nke na-agbalị ime ihe dị ịtụnanya na nke mbụ. Nke a abụghị a Chineke nke a mụrụ ụnyaahụ ma ọ bụ ọbụna a nde afọ gara aga. Nke a abụghị Chineke nke e kere. Nke a abụghị a Chineke onye aka na-kegide site na-akpọ chi nke ụwa a. The Chineke anyị na-aga ọzọ ndị mmadụ na nnọchite nke bụ otu Chineke onye kere oké ihe niile si nnọọ ihe.
Ọ bụrụ Ọ nwere ike ịmepụta niile e kere eke na naanị okwu, Ọ nwere ike mee ìsì, ndị nwụrụ anwụ n'ọnwụ.
Anya nile kpuru ìsì agaghị emeli n'ihi na Chineke anyị. Ajọ uche agaghị emeli n'ihi na Chineke anyị. Ọchịchịrị obi agaghị emeli n'ihi na Chineke anyị. ọ si, "Ka ihè" ozugbo na Ọ nwere ike ikwu ya ọzọ. Nke ahụ bụ isi ihe Pọl na-eme ka.
The imagery ọ na-eji bụ dị ka nke a. Obi anyị dị ka a big ụlọ, na bụ pitch nwa. The mgbidi ndị oké. E nweghị ndị na windows. E nweghị ndị na oriọna. Ọ dịghị ọkụ. Ọ dịghị ụzọ maka ìhè creep n'okpuru. All ime ụlọ a maara taa bụ n'oké ọchịchịrị. Izisa ozi ọma bụ mgbe onye guzo n'èzí nke na ọchịchịrị ụlọ na olu Kraịst bụ Onyenwe anyị. Ma ìhè ka na-adịghị na-abịa na. Ha na-aga n'akụkụ nke ọzọ ma Chịa, Ọ nwụrụ n'ihi mmehie na ọ na-bilitere! Ka na-enweghị ọkụ. Na mgbe ahụ na oge ọzọ otu News na-akọrọ, ma, oge a na Na Na Na Naa nke ebere Chineke na-akụri a dum site na otu nke ndị mgbidi na egbuke ìhè gị na mgbe hụrụ na-enwu site. Na ozugbo agba ọchịchịrị ime ụlọ bụ ugbu a ka na-egbuke egbuke dị ka ọ bụla n'ime ụlọ mgbe ọ pụrụ inwe. Ọ na-ewe Chineke ime na.
Christian, ma ọ bụrụ na ị hụrụ ebube Chineke na ihu nke Jesus, ma ọ bụrụ na ị na na na tụgharịrị site n'ọchịchịrị gaa n'ìhè, ọ bụghị gị ime. Ọ na-adịghị emecha nke na-eme nke onye na-akọrọ gị. Ọ bụ Chineke na-eme. Naanị Chineke nwere ike ime na. Ọ bụ ezie na chi nke ụwa a-ekpuchi anyị si ebube Jesus, na ezi Chineke dị ndụ na-enwu ìhè n'ime obi na-emepe anya nile kpuru ìsì. Na O na-eji Okwu ya na-eme ya.
Ọ bụrụ na obi gị na-agaghịkwa agba ọchịchịrị oleekwa otú nke ahụ na-egosi na ndụ gị?
C. Jisus anya mgbe nile n'Ekele
Ị ghọtara ihe Chineke meere gị? A ọtụtụ n'ime anyị, gụnyere onwe m, -adịghị ọnụma na-ezu banyere evangelism, n'ihi na anyị na-adịghị enwe ekele ezu na anyị ga-esi na-elekwasịkwa ebube Chineke na Gospel. Ọ bụrụ na anyị na-ọzọ weghaara, na ụtọ na Chineke anyị na ihe anyị nwere n'ime Kraịst, anyị ga-agwa ndị ọzọ ihe. Anyị na-agwa ha negosi na-amasị anyị, na ezi albums, na nzukọ. Ka anyị na-agwa ha banyere Jizọs? Mgbe anyị hụrụ n'anya ihe, anyị nwere ike ọ gaghị enyere ma ịkọrọ ya ndị ọzọ.
Christian, -uru nke ihe Chineke mere. Sook onwe gị na na Gospel, ma Chineke ka na-egosi ebube Ya anya n'ebe, na ihu nke Kraịst. Ọ dịghị akwụsị mgbe ị obi Ya. Unu anwala akpali n'oge gara aga na Gospel! Ọ bụ ebe anyị hụ ebube Chineke n'ụzọ kasị doo anya. Ọ bụ ihe niile nke Akwụkwọ Nsọ na-ezo anyị na-.
Olee otú Chineke ukwuu ịhụnanya Ya n'ebe anyị nọ. Chineke wụsara ndị na-akụ nke amara na anyị. Chineke egosipụta enwere anyị ndidi. Chineke na-egosi onwe Ya anya. Ìsì onye n'anya e weghachiri eweghachi na-adịghị eje ije gburugburu na blindfolds. Ị nwere anya. Ya mere, leruo.
Mgbe ị na-dara mbà n'obi, -echeta onye ị na-efe. Ịnọgide na-ekwusa ozi oma. Anyị na-ekwusa Kraịst n'ihi ya, ndị mmadụ pụrụ ịhụ ebube.
Ministry a daa gbara ọchịchịrị n'ụwa mgbe ọ bụla, na ga-adị mfe. Ma anyị nwere ike ịmụta Paul. Anyị nwere ike ịmụta, mbụ, ghara waiver n'ihi ịjụ ikom. Nke abụọ, ịkpachara anya ọrụ Satan. Nke atọ, makụọ ọrụ nke ozi. anọ, anya na ọrụ nke Chineke.
Gịnị ka m na-eme ma ọ bụrụ na m na ọ bụghị ozi oma dị ukwuu dị ka ma ọ bụ otú m ga-? Achọghị m ka ị na-ahapụ ya mbà. Lee ka Christ. Achọrọ m ka ị na-ahapụ ebe a ume, na ihe Chineke meere gị na Jesus. Na kpaliri ịgwa ndị ọzọ otú ha nwere ike na-enweta otu.
E nwere ihe nke ukwuu nọ n'ihe ize ka anyị na-eje ije gburugburu na-eche ihe ọjọọ n'ihi na anyị onwe anyị. Ukwuu na eto.
E nwere nanị abụọ nhọrọ maka anyị mgbe ndụ a dị n'elu. Anyị bụ ndị na-enwebeghị okwukwe ayi na Kraist, ga-ala n'iyi. Ọ bụrụ na anyị agaghị agbanwe uche anyị banyere mmehie, -ahapụ ya, ma tụba onwe anyị na ebere nke Jesus, anyị ga-edi mbibi ruo mgbe ebighị ebi.
Ma ọ bụrụ na anyị na-atụgharị na ntụkwasị obi n'ebe Christ, anyị esi na-ahụ a ghọta nke ebube-Ya now na ozioma Kraist. na mgbe e mesịrị, mgbe ọ na-alaghachi, anyị niile ga-ahụ ọhụrụ. Na anyị ga-elekwasịkwa ebube Ya na zuru, ruo mgbe ebighị ebi. Nke ahụ bụ ebube. E nwere ihe a otutu na eto. Ịnọgide na-ekwusa ozioma nke mere ikom nwere ike hụ ebube Chineke ruo mgbe ebighị ebi.
Jared Duba • August 22, 2013 na 1:55 pm • zaghachi
M'nọ na Hapụrụ na nụrụ ị ekwusa ozi. M ekele n'ezie maka ihe mesiri ike na Evangelism na a gbara ume na ọtụtụ folks mara ya. Ya, e nwekwara ikpe na kwuoro ka mkpụrụ obi m onwe. ekele, Bro!
Jay • August 22, 2013 na 8:35 pm • zaghachi
Cheta-enweghị ebe obibi Kraịst na m gwara unu banyere? Ha chọrọ enyemaka.. Enyemaka ọ bụla ga-abụ ụmụ okorobịa ọma. Chineke ga-egbo ma ọbụna Jesus apụghị ime ọrụ ebe e nweghị okwukwe. Onye ọ bụla na LA na-mbịne ha Akwadoo n'ihi enweghị okwukwe ha. -Ahapụ akwado alaeze ahụ na-enye ihe anyị nwere ike. Ha na-eme music na Mọ n'ezie na-ekwu okwu na ha lyrics. -Ahapụ agbasa na dị ka nke ọma! Anyị na-eme nke a n'ihi na ala-eze y'all. email livin4christ4lyfe@gmail.com .. -Ahapụ enyere umu-nna-. Gị n'anya niile. na Njem, biko nyere.. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ na ha mkpụrụ.. Lelee YouTube.com/livin4christ4lyfe ..
PJMadsen • August 23, 2013 na 4:43 Abụ • zaghachi
Chaị! Nke ahụ bụ n'ezie ezi! M ike na-eche ịkọrọ ya enyi m! Daalụ! M n'ezie-amasị na i nwere ike ịnụ na-ahụ ya on youtube…na kwa agụ ozizi dị ka Njem Lee na-ekwu ya n'okpuru ndị video! “Chineke na-agọzi anyị na onye ọ bụla.”
aha: Oh u preachin' ugbu a? @ TripLee116 eweta okwu ahụ pụta ... - UrbanGospelEntertainment.com @UrbanGospelENT
Shauneil • August 23, 2013 na 8:22 pm • zaghachi
magburu onwe ozi. Ọma e dere na nkọwa dị mfe. Ebee ka ịdenye aha button? Achọghị m ka na-pịgharịa site na ihe niile m peeji ịchọta gị post. :-) M nwere ike na-atụ uche ya.
SdoubleU • August 24, 2013 na 6:14 pm • zaghachi
Daalụ maka ozi a. Ọ bụ ihe m n'ezie mkpa ịnụ. Nke a website kemgbe a oké agba m ume. Chukwu gozie!
Amarie • August 25, 2013 na 9:02 Abụ • zaghachi
M looooooooooooove unsweetened nwere akpụrụ mmiri tii! ;-)
DJ • September 11, 2013 na 6:43 pm • zaghachi
m, njem! ekele Dude! Ozi gị n'ezie-nd-sitere n'ike mmụọ nsọ m. M na a nnọọ nkụda mmụọ n'oge na-adịbeghị na a nyere nnọọ aka.
residential blinds • July 23, 2019 na 7:07 Abụ • zaghachi
Ga-n'anya na edebewo ya na ìhè anyanwụ.